Naya Bikalpa | » प्रधानमन्त्री बन्ने ‘बामदेव सपना’ राष्ट्रियसभा सदस्यमा गएर तुहियो, मन्त्री बन्न संवैधानिक अड्चन प्रधानमन्त्री बन्ने ‘बामदेव सपना’ राष्ट्रियसभा सदस्यमा गएर तुहियो, मन्त्री बन्न संवैधानिक अड्चन – Naya Bikalpa
प्रधानमन्त्री बन्ने ‘बामदेव सपना’ राष्ट्रियसभा सदस्यमा गएर तुहियो, मन्त्री बन्न संवैधानिक अड्चन
प्रकाशित मिती: २०७७ भाद्र ३०, ११: ४०: २६
काठमाडौं – गएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएपछि नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संसदमा प्रवेश गर्ने अनेक बाटा खोजिरहे।
बिभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर आउने उनको चाहनमा तुषरापात भएपछि राष्ट्रियसभामा आउने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने असफल प्रयास गरेका थिए। तर पछि गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित हुने र अर्थमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री हुने योजना बनाए।
नेकपा भित्रको समीकरणको फाईदा उठाउँदै गत फागुन १४ को सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गर्याे । निर्णय भएको छ महिना पुग्दा पनि कार्यन्वयन हुन पाएन।
दलीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि साे निर्णय कार्यन्वयन बाध्यकारी थियो। सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनितका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
शितलनिवास स्रोतका अनुसार मन्त्रिपपरिषदको निणर्यको सिफारिस मंगलबारसम्ममा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छैन् ।
एक कानून ब्यबसायीका अनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस निर्णय भएको कति समय भित्र राष्ट्रपतिकाेमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुनै कानूनी ब्यबस्था छैन ।
गौतमलाई मन्त्री बन्न सबैधानिक अड्चन
नेपालको संविधानको धारा ७८ अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्ति सो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरी सरकारमा सहभागि हुन सक्दैन।
अहिले गौतमले चुनव हारेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम छ। त्यस कारण यो विवादमा हात हाल्न प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार छैनन। पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न बाध्य भएकोले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय ओलीले गरेका हुन् ।
कसलाई मन्त्री बनाउने ? कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने ? भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको तजबिजी अधिकारमा भर पर्छ। यो बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई कसैले बाध्य पार्न सक्दैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्न संभावना कम छ।
प्रधानमन्त्री बन्ने गाैतमकाे सपना राष्ट्रियसभामा पुगेर तुुहियो
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको सपना राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा पुगेर तुहिने भएको छ। अबको २ बर्षमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने छ। त्यसमा उम्मेदवार हुनका लागि गौतमले राष्ट्रियसभाको सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसबेला गौतमको कार्यकाल ४ बर्ष बाँकी रहने छ। नेकपा भित्र आउने चुनावमा टिकटका लागि दौडा दौड हुने छ। राष्ट्रियसभा सदस्य भएका कारण गौतमले यो दौडबाट किनारा लाग्नुपपर्ने छ। त्यसपछिको चुनावमा गौतमको उमेर निकै घर्कीसकेको हुने छ।
२०७७ भाद्र ३०, ११: ४०: २६